नेकपा कार्यकर्ताद्वारा सरकारी गाडी तोडफोड - पोखरा समाचार
३ आश्विन २०७४, मंगलवार १६:३३ 19/09/2017 पोखरा समाचार
आश तमु/पोखरा । नेत्रविक्रम चन्द “विप्लव” नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मंगलबार दिउँसो एक सरकार गाडीमाथि तोडफोड गरेका छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नं. ८ जनप्रियस्कूल नजिक रत्नचोकमा रोकी राखिएको बा १ झ ९६२२ नं. को सरकारी गाडीलाई नेकपाका कार्यकर्ताहरुले तोडफोड गरेका हुन् । सो गाडी कुन सरकारी कार्यालयको हो भन्ने बारेमा खुल्न सकेको छैन ।